Nidaamka Nalalka ee MediaLight Pro 6500K CRI 99 Ra - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Bogga ugu weyn Nidaamka Nalalka ee MediaLight Pro 6500K CRI 99 Ra
Guji si aad u ballaadhiso Taabo si aad u weyso
Nidaamka Nalalka ee MediaLight Pro 6500K CRI 99 Ra
Keydso ilaa $ 100.00 Save $ 100.00
Qiimaha asalka ah $ 119.95
Qiimaha asalka ah $ 119.95 - Qiimaha asalka ah $ 399.95
Qiimaha hadda $ 299.95
wax soo saarka.waydayaasha.hoose_variant MediaLight Pro 20 "(51cm) Qaybta Strip - $ 89.95 MediaLight Pro 20 "(51cm) Naqshad" Isugeyn "Nooca - $ 97.95 MediaLight Verso Pro 4 Meter (157 inji) Xarig (5v USB ku shaqeeya) - $ 262.95 MediaLight Mega Pro 5 mitir (197 inji) 12v (kuma xirna USB-ga) - $ 299.95
MediaLight Pro 20 "(51cm) Nooca Strip MediaLight Pro 20 "(51cm) Nooc adag" ku rakib " MediaLight Verso Pro 4 Meter (157 inji) Strip (5v USB ku shaqeeya) MediaLight Mega Pro 5 mitir (197 inji) 12v (kuma xirna USB-ga) Version
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + tirada
Our D65 CRI 99 eexasho khafiif ah oo loogu talagalay saxnaanta iyo iswaafajinta
Fadlan ogow: Haddii aadan ahayn midable xirfadle ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto Mk2 Taxanaha halkii.
Xaqiiqdii, xitaa haddii aad tahay midab-yaqaan xirfadle ah, fursadaha ayaa ah inaad raadineyso Mk2 Taxanaha. Chips-yada 'Mk2' waa kuwo yar yar oo tamar badan wax ku ool ah, tanina waxay noo oggolaanaysaa inaan abuurno xarigyo dhaadheer oo aan lahayn hoos u dhac ku yimaadda korantada. Taxanaha cusub ee 'Mk2 Series' ayaa si qosol leh ugu dhowaanaya waxqabadka Pro ee 1/3 qiimaha. Xaqiiqdii, TLCI, labaduba waxay qiimeeyaan 99 ka mid ah 100.
Taxanaheena 'MediaLight Mk2' wuxuu leeyahay CRI ≥98 Ra. Waxqabadka wuxuu aad ugu egyahay inta udhaxeysa Pro iyo Mk2, in kasta oo MediaLight Pro uu adeegsado emitter dhow oo violet ah. Tani waxay dhaqaajineysaa kor u qaadista sawir-qaade ka hooseeya waxa isha aadanaha ay arki karto (inteena badan, si kastaba) SPD-da soo hartay waxay u egtahay mid la mid ah qoraxda D65, marka laga reebo iftiinka infrared, dabcan. Si kastaba ha noqotee, sida dhammaan alaabadayada, marna kama sheeganeyno in alaabteennu ay yihiin D65. Waxaan u adeegsaneynaa ereyga "jilid D65" sababtoo ah farqiga muuqda ee u dhexeeya iftiinka qoraxda iyo iftiinka LED-ka.
Halkan 2020, waxay noqon laheyd mid aan sax aheyn in loogu yeero nalka dad sameyska ah oo aan laga sooci karin iftiinka qoraxda. Waxaan go'aansan karnaa iskudhiska kiimikada ee xiddigaha fog ee leh spectrophotometers waxaana runti u sheegi karnaa iftiinka qoraxda ilaha LED-ka
Maxaad u sameysay nalalka CRI 99 eex si aad u iftiimiso muuqaal cirro leh oo cirro leh?
1) Maxaa yeelay waan awoodnay.
2) Sababtoo ah waxaan aaminsanahay inay tahay meesha teknolojiyadda LED-ka macaamiisha ay ku jiri doonto dhowr sano.
3) Sababtoo ah haddii qof uu marka hore sameyn doono, waxaan isla garanay inay sidoo kale annagana noqon karto. ¯ \_ _ (ツ) _ / ¯
20-inch MediaLight Pro ayaa qabata ma ku dar masaafad (cabirku wuxuu ku jiraa fiilada). Waa ma ku habboon bandhigyada darbiga lagu dhejiyo. Taabadalkeed, isticmaal MediaLight Verso Pro. Weli waxay socotaa 5v 1a, USB 3.0. Waxaa ku jira cabbir iyo hago fog.
Teknoolojiyaddu way socotaa, si kastaba ha noqotee, waxaanan hubnaa in 18-ka bilood ee soo socda gudahood, dhammaan badeecadeenna caadiga ahi ay yeelan doonaan CRI ugu yaraan 98 Ra iyo TLCI oo ah 99. (Xusuusin laga bilaabo 2020: tan horeyba waxay ugu dhacday khadkayaga Mk2 waxayna qaadatay 20 bilood).
The MediaLight Pro waxaa loo sameeyay midableyda ubaahan CRI-ga ugu sareeya iyo awood qeybsiga awooda muuqaalka ugu labisan ee ileyska iftiinka muuqaalkooda xirfadeed. Pro isticmaalaa fasal cusub oo ka mid ah ColorGrade ™ Qalabka SMD (LED), oo ay ku shaqeynayaan matoorada sawir-qaadaha u dhow, iyo tusmada muujinta midabka cajiibka ah (CRI) ee 99 Ra (TLCI 99.3 Qa). MediaLight Pro waa mid aan laga sooci karin iftiinka maalinta ilaa isha aadanaha.
Waa nooc gebi ahaanba cusub oo nal eex ah, oo ay ku shaqeyso fasal cusub oo ah iftiinka SMD (LED).
Isha bani’aadamku waxay ugu horreyn aragtaa dhererka dhererka u dhexeeya 400-700 nanometer. Qalooca qaybinta awoodda korantada (SPD) ee loogu talagalay MediaLight Pro waxay muujineysaa in halkii laga sheegi lahaa culeyska buluugga ah ee adag ee laga helo nidaamyada cad ee caadiga ah ee LED-ka, tamarta mashiinka sawir-qaadaha u dhow ayaa inta badan ku dhaca xadka hoose.
Nidaamyada iftiiminta badeecadaha badankood waxay ku kala baxaan qiimaha R9 iyo R12, kuwaas oo aan lagu darin xisaabinta CRI, laakiin waxay lagama maarmaan u yihiin taranka aaminka ah ee midabbada maqaarka iyo casaanka qoto dheer. Badanaa waxaa lagu beddelaa tamar badan oo tamar-badan, iyo fosfoor cagaaran oo raqiis ah, taas oo keeni karta midab cagaar ah, xitaa marka loo isticmaalo in lagu iftiimiyo dusha sare ee cawl, sida ay tahay kiiska laydhka eexda. Wixii ka dambeeya mashiinka sawir-qaadaha 'violet photon', oo baabi'iya "buluug koror leh," Warbaahinta MediaLight waxay isticmaashaa iskudhaf khaas ah oo fosfoorasyo ​​ah oo ay kujiraan casaanadan muhiimka ah, taas oo dhalisay SPD aad u jilicsan iyo iftiin dabiici ah.
Iyadoo la adeegsanayo tusmada midab bixinta (CRI) ee 99 Ra (TLCI 99.3 Qa) iyo CCT ee 6500K, MediaLight Pro ayaa ah nidaamka ugu casrisan ee loo yaqaan 'D65' nidaamka nalka eexda ee la heli karo maanta.
Waa is haysta. Waxaa lagu shubi karaa USB 2.0 ama USB 3.0 dekedaha kormeerahaaga mihnadlaha ah, waxayna ku kacaysaa 1/3 qiimaha korantada sare ee CRI, buluug emitter ku saleysan eexasho aan sax ahayn.
MediaLight Pro Tilmaamo:
6500K CCT (Heerkulka midab isku mid ah)
50 cm xargaha laydhka jilicsan ama noocyada kanaalka aluminium ee adag - waxay ku habboon yihiin 24 "kormeerahaaga xirfadeed
4m Verso Pro wuxuu gebi ahaanba mari doonaa afar dhinac oo 60 "muuqaal ah, ama daboolaya 3 dhinac (bidix, kore iyo midig) bandhig ilaa 85"
4ft fidinta fiilada USB - waxaa laga shidan karaa USB 2.0 ama USB 3.0 dekedaha ku yaal muuqaalkaaga ama kumbuyuutarkaaga
Ay kujirto PWM dimmer
5v Awooda USB
Lagu soo daray agabyada fiilooyinka siligga lagu maro
Fiiq oo ku dheji 3M VHB xabagta dhejinta
5 Warqad Xaddidan Xaddidan
Waxaad dhawaan aragtay
Nadiifi dhowaan la eego